အမှုန့် - အခြေမဆိုအမျိုးသမီးလှဆိုလိုသည်။ လွယ်ကူသောကြောင့်တက် Pick, သင်ကအရိပ်ထဲတွင်သင်၏မျက်နှာမှသေံနှင့်အတူပေါင်းစည်းစေဖို့လိုအပ်လို့ပဲ။ ဒါပေမယ့်သူကအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့, အရေပြားမှချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏ "ပျော်" တဲ့မှုန့ထုတ်ကုန်ရှိသေး၏။ ဒါဟာ - zagarnaya အမှုန့်, အနက်ရောင်အလှအပ မှလွဲ. ကိုက်ညီကြောင်းမှောင်မိုက်အရိပ်။ အဘယ်အရာကိုကို "paleface" မိန်းကလေးတွေမှာမှောင်မိုက်အမှုန့်ရဲ့ကျော်ကြားမှုကရှင်းပြသည်?
လျှောက်လွှာ zagarnoy အမှုန့်သုံးရည်ရွယ်ချက်များကိုလိုက်ရှာ:
နေလောင်ခြင်းအရေပြားပေါ်မှာသုံးပါ။ သငျသညျကမ်းခြေပေါ် tan နွေရာသီအတွက်အကောင်းမှန်လျှင်, ရုံပင်လယ်, ဒါမှမဟုတ်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ်ပန်ကာမှပြန်လာသော အဆိုပါဆိုလာရီယံ , များသောအားဖြင့်အလင်းအမှုန့်သင်၏မျက်နှာကိုဂြိုလ်သားအပေါ်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အသားအရေရဲ့အရောင်ပေါ် မူတည်. ပြင်းထန်သောနေရောင်၏ကာလအတွက်တစ်ဦးယုတ္တိမှောင်မိုက်အမှုန့်ကိုသုံးပါ - "zagarku" အလင်းသို့မဟုတ်အလတ်စားတန်ချိန်၏။
Sculpt ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒါဟာ (ကအခြေစိုက်စခန်းသေံ, အမှုန့်-အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ) အားလုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပေါ်မိတ်ကပ်၏ superimposition ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက "အပြား" ကိုအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာ,: - ထိုသို့တက်မြိန်နှင့်လက်ျာအလေးပေးနေရာကြောင်းအလေးပေးဖို့တစ်ခုခု, ဆန့်ကျင်ပေါ်, လျှော့ချ, နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြု Highlights , bronzer ။ လူတစ်ဦးရဲ့အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ် zagarnaya အမှုန့် "ဆွဲ" ရန်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "ဖုံးအုပ်" လိုအပ်သောအထင်ရှားဆုံးအချက်များနှင့်နေရာများ၏ပုံတလျှောက် bronzer ဖြီးနှင့်အတူလိုက်လျှင်, လူတစ်ဦးထက်ပိုသောအသက်ရှင်လျှက်ပုံ, ပါးလွှာဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်ဦး tanning အကျိုးသက်ရောက်မှု Creating ။ တောင်မှသူတို့အအတု tan ကြိုက်တယ်နှင့်နွေးထွေးသောနိုင်ငံများရှိဘူးသူကိုဥပမာအားဖြင့်, "ဟုအဆိုပါလမ်းမှထွက်ပေါ်။ " တခါတရံတွင်သင်သည်ချောကလက်အသားအရေရှိသည်ဖို့လိုမလိုက်မသွားနိုင် အလယ်အလတ် tan ထိုမိန်းမသည်တစ်ဦးလတ်ဆတ်ပေးသည်, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ, သင်အလေးပေးဖို့မျက်နှာ, လည်ပင်းနှင့်ရင်ဘတ်ဧရိယာပေါ်မှာထားလျှင်သင်, zagarnoy အမှုန့်ကိုသုံးခြင်းဖြင့်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
Zagarnye အမှုန့်အရိပ်, texture နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်တူညီနေကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ဟာ friable နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနှင့် Multi-ရောင်စုံသော, မှုန်များနှင့် shimmering ဖြစ်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာအမှုန့်နေ့စဉ်များ၏ဝယ်ယူမှသကဲ့သို့ဂရုတစိုက်ဖြစ်သင့်သည်။ Zagarku သူမသဘာဝကိုကြည့်မပြုခဲ့ကြောင်းသူမ၏မျက်နှာပေါ်မှာစမ်းသပ်ဖို့ပိုကောင်း: အရိပ်လည်းမှောင်မိုက်သို့မဟုတ်အုတ်မဖြစ်သင့်, ဒါပေမယ့်သဘာဝ tan ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။ အတော်များများကအမှတ်တံဆိပ်ဆံပင်ရွှေရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဆံရှင်များအတွက်အထူးအမှုန့်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
အဆိုပါအမှုန့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတော်ကြာ segments များရှိပါတယ်သည့်အခါအဆင်ပြေ, - ထို့နောက်ခြယ်ပစ္စည်းများနှင့်အရောင်အသွေးများ၏ပြင်းထန်မှုရာသီပေါ် မူတည်. ကွဲပြားနှင့်သူ၏မျက်နှာပေါ်မှာနေလောင်ခြင်းအတင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါအမှုန့်အမှုန်သို့မဟုတ်တောက်ပ shimmernogo အစိတ်အပိုင်းအတွက်ရှေ့မှောက်တွင်အာရုံစိုက်။ သငျသညျအလငျးကိုမလိုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, တစ်မှုန်သောအမှုန့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ရုံ shimmering အမှုန့်အဆီပြန်အသားအရေနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်ဖို့သင့်လျော်ဘူး။
အမှုန့် zagarnuyu လျှောက်ထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မဟုတ်ရင်သင်ရွံရှာဘွယ်သောရောနှောအသားအရေသို့မဟုတ်အနီရောင်အစက်အပြောက်ရစေခြင်းငှါ, အလွန်နူးညံ့သောအမှုန့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုအသုံးပြုဖို့ Zagarnoy ။ ပါဝင်သည် "ကိုယ်ပိုင်" ဖြီးမပါလျှင်, zagarku မှုန့သို့မဟုတ် bronzer များအတွက်အထူးဖြီး Apply ။ ပုံပေါ်အမြတ်အမှုန့်မဆိုပိုလျှံပယ်သွားတိုက်မှပိုကောင်း, ပေါများစရာမလိုပါ။ မျက်နှာပေါ်မှာ Zagarnuyu အမှုန့်ဟာ cheekbone အောက်မှာ loop တစ်ခုအောင်နှင့်မေးစေ့ပေါ်အဆုံးသတ်ရေး, ဗိမာနျတျောရက်နေ့တွင်, နဖူးအထက်ကနေတစ်ခုတည်းလှုပ်ရှားမှု၏ပုံမှလျှောက်ထားသည်။ သင်ကနှာခေါင်း၏အတောင်ပံပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့ကို၎င်း, နားပျဉ်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့မလည်ပင်း, ရင်ဘတ်နိုင်မည်အကြောင်း - ဒါကြောင့်သူတို့ Sun ကအတုဇာစ်မြစ် "သစ္စာဖောက်" ပါဘူး။
အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က collection များကိုစီနွေဦးနဲ့နွေရာသီရာသီမှ zagarnye အမှုန့်ထုတ်လုပ်အဖြစ်အမြဲတမ်းနှင့်ထုတ်ကုန်ရှိသည်။ ဒီနေရာတွင်ပဲကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်၏လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်အချို့ကို zagarnye နေကြသည်:
Guerlain: ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု4Seasons, မင်းသမီး Powder, မှ Terra အင်ကာ, Mosaique, မှ Terra Azzurra Bronzer & မျက်နှာမပျက်, ထိုစီးတီး, မှ Terra Soleia အတွက်ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု Sun က;
Estee Lauder က: Creme caramel Lauder ကကြေးနတ်ဘုရားမ;
Chanel:4Lumieres, Poudre soleil, ကြေး Corail Soleil Tan ကက de Chanel soleil Poudre;
Givenchy: Fleur de Frangipani, Poudre Bonne မိုင်းကျန်းမာရေး Glow;
Dior: Shimmer, Diorskin ဝတ်လစ်စလစ်သဘာဝအရောင်ကြေးဝါ Powder;
Pupa: Luminys ကြေးဝါ Powder, ကန္တာရကြေးဝါ Powder;
အီဗာက Mosaic: ကမ္ဘာကပ်ဘာရက်။
အဆိုပါပို mascara မှေးမှိန်?
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးများအတွက်မိတ်ကပ် - အပြာ, အစိမ်း, အညိုနှင့်မီးခိုးရောင်မျက်လုံးပိုင်ရှင်များအတွက်လှပသောလုပ်-ယား၏ 40 မျိုးပေါင်း
ဝက်ခြံ - ကုသမှု
Anne Hathaway ကိုယ်ဝန်ရှိ
နောက်ပြီး 2017 - သတင်းများ, အတွေးအခေါ်များ, ခေတ်ရေစီးကြောင်း, အရောင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
Hepatoprotectors - သင့်အသည်းပြန်ပေးမည်ကြောင်းသက်သေထိရောက်မှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးများစာရင်းကို
Hirudotherapy - လက္ခဏာများနှင့် contraindications
Kanye West နဲ့စတိုးဆိုင်၌အိပျပျြောမြောက်ကလေး
Liam Payne ဘုရင်မကြီးရဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်များ၏အခမ်းအနားတွင်ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II နဲ့မင်းသားဟယ်ရီနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
Hi-tech ရဲ့ style အတွက်အိမ်များ
ကိုယ်ဝန် 39 အပတ်က - ပို့ဆောင်မှုအရှိန်မြှင့်ဖို့ဘယ်လို?
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အသားရေအိတ် Francesco ဖြစ်သော Marconi, အီတလီ
ကျားပုစွန် - ကြော်
ဖဲစားဆင်ယင် - အရှိဆုံးကြော့များအတွက် chic မတ်မတ်